Orange Pi Uyezve: nyowani inokanganisa SBC bhodhi | Linux Vakapindwa muropa
Orange Pi: Raspberry Pi-dhizaini isingabvumirwe SBC
Shenzhen Xunlong yakaparura bhodhi reSBC rakafanana ne Raspberry Pi kwemakumi mashoma emadhora. Iyo yakavhurika uye inotsemuka. Iyo yakaderera mutengo kusimudzira bhodhi ichakwikwidzana neakawanda aripo ayo anovavarira kukwikwidza iyo Raspberry Pi. Iyo Orange Pi Inotengeswa mushanduro mbiri, imwe yakakosha uye imwe inonzi Orange Pi Mini, zvese zvaunogona kutenga kuchitoro chakakurumbira aliexpress.com.
Rakareruka Orange Pi rinodhura madhora makumi mana nemasere uye rakavakirwa pa SoC Allwinner A20 ARM, nepo inodhura zvikuru Orange Pi ichikwira inosvika kumadhora makumi mashanu nemasere uye nekudzoka inosanganisa imwe vhezheni ine simba yeAllwinner chip, kunyanya A58S. Mune mamwe ese Hardware, ese mabhodhi eSBC akafanana uye kunyangwe maererano nemaitiro.
Ose anobatanidza CPU yakavakirwa paARM Cortex A7 Dualcore uye Quadcore (mune yakasimba kwazvo vhezheni), Mali GPU inoenderana neOverGL uye 1GB DDR3 RAM, mukana wekutarisa kusvika ku64GB yekuchengetera kuburikidza nemakadhi kana kuburikidza nechiteshi cheSATA, kubatanidza odhiyo, CSI yekubatanidza yekamera, HDMI, VGA, USB OTG, USB 2.0, simba, GPIOs, IR, nezvimwe.
Kana ari akatsigira anoshanda masisitimu, pane Raspbian, Ubuntu, Debian, Android 4.4 uye dzimwe shanduro dzeGoogle's system. Dzese dzinogona kupihwa simba neAllwinner machipisi uye iyo Hardware inounzwa neaya SBC (Imwe Bhodhi Komputa) mabhodhi.
Kana izvi zvikaita sezvidiki kwauri, Shenzhen Xunlong yaita kuti iwanikwe kuruzhinji, ye $ 59, imwe Orange Pi Uyezve, imwe vhezheni ine simba ine 3Ghz quad-core Allwinner H1.6 SoC uye nerutsigiro rweSATA neWiFi. Nenzira, aya mabhodhi anoenderana neyekuwedzera pini dzeiyo yekutanga Pi ...
¿Musiyano wakadii kune raspibheri orenji? Zvakanaka anenge maplate ese eSBC akafanana uye angangoita ese akataridzika kuve akafanana akafanana eRaspi. Iyo inyaya yekuravira kana zvido, hapana misiyano yakakura inogona kupomerwa, kunze kwemabhodhi asingateedzere mwero uye akavakirwa pazvivakwa zvisiri ArM (senge iwo akavakirwa x86).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Orange Pi: Raspberry Pi-dhizaini isingabvumirwe SBC
… Uye yaive nyaya yako yese?
Kugamuchirwa: Matipi epamusoro eLinux Nyowani
Maguta: Skylines iri kuuya mumwedzi chete (Kurume 10)